Lalao Closed boaty aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Closed boaty an-tserasera
Lalao Online Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Puzzle Manan-tsaina Ny Fanabeazana Efijery kasihina Html5 Android
Ny vata mihidy ireo biby isan-karazany sy maika ianao mila hanafaka azy ireo mandra-pahatongany nanempotra avy amin'ny tsy fahampian'ny rivotra. Eritrereto ny hetsika izay hanampy anao hanokatra ny tavoara feno volafotsy sy volamena. Ny fanalahidin 'ny baoritra dia ao an-toerana miaraka amin'izay koa toerana. Mitodika amin'ny mirindra fomba fisainany sy miezaka ny hitondra ny baoritra ho any amin'ny fanalahidy. Boaty mandeha afa-tsy amin'ny tsipika mahitsy ary tsy hivily. Eritrereto ny fomba ahafahanao manao izany haingana sy hanampy ny mahantra biby.